ဖတ်ကိုဖတ်သင့်တဲ့ TBM အကြောင်းနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ - ICT Consulting Firm ဖတ်ကိုဖတ်သင့်တဲ့ TBM အကြောင်းနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ - ICT Consulting Firm
ကျွန်တော်တို့ IT အတွက်ကုန်ကျတဲ့စရိတ်တွေဟာ တနှစ်ထက် တနှစ် များလာတယ်။ အရင်ကဘာလို့ဒီနှစ်လောက်မများတာလဲ? ဒီနှစ်ကျတော့ဘာလို့ပိုသုံးရတာလဲ? ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံတွေက ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ တွေးဖူးလား?TBM ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
TBM ဆိုတာဘာလဲ? Technology Business Management လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူက standard ကျတဲ့ IT Taxonomy တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်နေတဲ့ management framework ပဲဖြစ်ပါတယ်။ TBM ဆိုတာ IT ကိုစီးပွားရေးဆန်ဆန် အသုံးချတာပါ။ သူကအခုမှထွက်ပေါ်လာတဲ့ နည်းပညာ‌တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိနေခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြာခဲ့ပါပြီ။
TBM ရဲ့ Stakeholders တွေကဘယ်သူလဲ ?TBM မှာ ပါဝင်ပက်သက်နေသူလေးမျိုးရှိပါတယ်။- CIO – Application Owner- Infrastructure & operations- CFO တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
TBM ရဲ့ Taxonomy ဆိုတာဘာလဲ ?- IT costs နဲ့ capabilities တွေကိုချိန်ထိုးပြီး finance, IT , နဲ့ Business တွေအတွက် perspective3မျိုးနဲ့ Transperacy ပေးတာပါ။ သူ့ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲ ?- IT ရဲ့ unit cost ကိုမြှင့်တင်ပေးမယ်။ cost နဲ့ quality ကို balance ဖြစ်စေတယ်။- Better service တွေ Technology တွေ အကောင်း‌ဆုံး vendor တွေရွေးတဲ့အခါမှာ အချိန်နဲ့ resource ပိုပေးနိုင်မယ်။- new opportunities တွေမှာ မိမိက Capitalize ဖြစ်နေနိုင်မယ်။- maximum value ပေးတဲ့ IT partner ကိုရရှိစေတယ်။
TBM က IT အတွက် cost တွေကို အသေးစိတ် visibility ပေးတဲ့အခါကျ‌တော့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေအတွက်ကုန်ကျလာတယ်ဆိုတာကို တိတိပပ မြင်သာလာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် IT အတွက် တကယ်သုံးဖို့လိုမယ့် category တွေကို ချုံ့ပစ်ပြီးတော့ အလဟဿဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကို လျှော့ချလိုက်နိုင်တယ်။ Future investment လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း decision အောင်မြင်စွာချနိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးတယ်။ Organization တစ်ခုရဲ့ C – level executive တွေအတွက် Corporate World ကိုဖော်ဆောင်တဲ့‌နေရာမှာ milestone တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။